Ngokuthe ngqo kwi-Manuel Antonio Beach!! - I-Airbnb
Ngokuthe ngqo kwi-Manuel Antonio Beach!!
Indlu engaselwandle yenye yezindlu ezimbalwa ezifumaneka ngqo kunxweme lweManuel Antonio! Unokuva kwaye ubone amaza etyibilika ngoxa ubukele ukutshona kwelanga okumangalisayo kwipuli yakho - iyamangalisa nyhani! Le ndlu inemigangatho epheleleyo inomahluko wokuba ibekwe ehlathini eliluhlaza, kodwa iselunxwemeni. Nokuba ukhetha ukuhlala elunxwemeni, ukusefa okanye ukukhe uphumle nje kwiJacuzzi ememayo okanye ipuli yokuqubha, le ndawo iza kuba yeyona uza kufuna ukubuyela kuyo unyaka nonyaka!
Elinye lamakhaya ambalwa akwiPlaya Espadilla Beach eManuel Antonio. Indawo yokutyela yangaphakathi/ yangaphandle kunye neyokuhlala. Yiva amaza ehleka kwiveranda yakho ngoxa ubona izilwanyana zasendle ngaphandle nje komnyango wakho!
Umntu oncedisa ekubukeni iindwendwe wasekuhlaleni uza kufumaneka ukuze akuncede ngokukhenketha, ngeenkonzo ze-spa. Iinkonzo zabapheki, njl kunye nokuya kuyo nayiphi na ingxaki enokufika ngexesha lokuhlala kwakho.